ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: မေ၁၆ရဲ့ ငယ်ဘ၀အမှတ်တရ
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, December 22, 2009
flowerpoem December 22, 2009 at 1:54 PM
မေ16 ငယ်ငယ်က အဆော့မက်ပုံကတော့ သူတို့ အိမ်ကိုသွားတိုင်း အဖွားနဲ့ အဖေအမေတွေက ပြောမဆုံးပါ (ခုချိန်ထိလည်း မကြီးမငယ်နဲ့ ဆော့တုန်းပါ)မယုံမရှိနဲ့ ကိုယ်တွေ့ဗျို့
ညခင်း December 22, 2009 at 1:55 PM
may16 December 22, 2009 at 1:56 PM
တောင်ပေါ်သား December 22, 2009 at 2:21 PM
အဟီး ကလေးဘ၀ သောင်းကျန်းတာတွေ ဖတ်သွားတယ် ပျော်ရွှင်စရာပါပဲ
Welcome December 22, 2009 at 4:15 PM
သမိုင်းကို လှန်ရင် ပျော်စရာနဲ့ အမှတ်ရစရာတွေ အများသားပါ။
ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ် ...
ဂျပန်ကောင်လေး December 22, 2009 at 6:21 PM
း)).. မမေရဲ့ ငယ်ဘ၀လေးက ပျော်စရာပဲ... ယောင်ပေစူးတကယ်ထားခဲ့လား...း))
နေ့အိပ်မက် December 22, 2009 at 6:53 PM
ဘယ်သူအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေ ဖတ်ရရင် ကြည်နူးစရာနော်
နွေဆူးလင်္ကာ December 22, 2009 at 7:22 PM
ငယ်စဉ်ဘ၀ကို ပြန်ငဲ့ကြည့်တော့ အဖြူရောင်သက်သက် ပျော်စရာတွေနဲ့ ...
အနမ်း December 22, 2009 at 11:47 PM
ငယ်ဘ၀ဆိုတာလွတ်လပ်ပါတယ်။ အပူအပင်မရှိငယ်ငယ်ကဘ၀လေးတွေကို လူတိုင်းတမ်းတမိတာပဲနော်။ ဖတ်ရင်းပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိပါတယ်။
မိုးစက်အိမ် December 23, 2009 at 4:18 AM
အာ မမေလည်း ငယ်ငယ်က တော်တော် ကစားမက်တာဘဲ
မိုးစက်အိမ်နဲ့ တွေ့ ရမှာ . . . ဒါမှ လောင်းကျော်ကုန်မှာ ဟီးးးးးးး
ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ် ဗျ . . . ဒီခေတ်ကလေးတွေက ကျွန်တော်
တို့ ကလို အလေလိုက်ဆော့နေတာမျိုးမရှိကြတော့ဘူး IT ခေတ်
မို့ လားတော့သိပါဘူးဗျာ . . . အင်း ငယ်ငယ်က အကြောင်းလေး
တွေ ပြန်တွေး ပြန်ရေးတော့လည်း ပြုံးရ သတိရ ကြည်နူးရတယ်ဗျာ
ကိုလူထွေး December 23, 2009 at 6:19 PM
သူငယ်ချင်းအပေါင်းအဖော်များရယ် ကောက်ရိုးပုံတွေကြား တူတူပုန်း ကစားကြတယ်...
(အပြုံးတွေမှာ ကြည်နူးရိပ်တွေ မြင်ရတယ်...)
dandaryee.com December 23, 2009 at 9:47 PM
မမရေ ပျော်စရာလေးတွေနဲ့ ငယ်ဘ၀ကို လာအားပေးသွားပါတယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြန်ငယ်သွားတယ်။း)
မိုးထက်အိမ် December 24, 2009 at 1:17 PM
ဟ ဟ.. မမမေလည်း ဒီသီချင်းလေး ကြိုက်တယ်လား.... :)
မြစ်ကျိုးအင်း December 25, 2009 at 8:17 PM
ငယ်ဘဝတွေပြန်တွေးတိုင်း ကြည်နူးရတယ် ။ ကြည်နူးနေရင်းနဲ့ ပြန်မရနိင်တော့မှန်း သတိရသွားရင် ၀မ်းနည်းသွားမိတယ်။
အရာရာက ကျန်ခဲ့ပါပြီ ။